Madaxweyne Daboolka Ka Qaaday Hal Arin Oo Cajiib Ah Oo Ay Real Uga Fiican Tahay Kooxaha Kale %
Davor Suker, oo ah Madaxweynaha xiriirka kubada cagta wadanka Croatia, kaasoo horeyn usoo ahaa ciyaaryahan, misana usoo dheelay kooxo ay Real Madrid kamid tahay ayaa sheegay in Los Blancos ay tahay mid niyada kaga duwan kooxaha kale.
Madrid ayaa bilowgii fasal ciyaareedkan waxay lasoo gashay garoomada bandhig ciyaareed liita, laakiin qeybta labaad ee xagaagan waxay soo bandhigeysaa inay tahay mid wali utaagan daafacashada horyaalka La Liga, oo ay sanadkii hore qaaday.
Boqorada La Liga, ayaa waxay hada kaga jirtaa shaxda kala horeynta ee La Liga, kaalinta saddexaad waxayna leedahay 57 dhibcood, iyadoona ka dambeysa kooxaha kala ah: Atletico Madrid oo 64 Buundo leh iyo Barcelona oo 72 ah.
Suker oo la hadlayay Majalada MARCA, ee wadanka Spain, kaasoo la weydiiyay waxa ay uga duwan tahay Real Madrid kooxaha kale ayuu ku jawaabay: “Maskaxda.
“Furaha ayaa ah inaan haysato Banooniga, aadna udhaqaaqin kartid habeenka [kulanka] oo dhan meel walba oo garoonka kamid ah,” ayuu hadalkiisa kusii daray.
“Waxaa waajib ku ah inay udheelaan sida iyaga oo og inay sameyn karnaa isbedal, taasina waa wax iska cad,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, Madaxweynaha xiriirka kubada cagta wadanka Croatia, Davor Suker.
Davor SukerReal Madrid